- उमाशङ्कर द्विवेदी वाष्र्णेय सारथि गइसकेपछि पुष्करले पासा खेलेर राजा नलको राज्य र धन जित्यो । उसले नल हारेकोमा उनलाई नानाथरि कुरा गरेर गिज्याउन थाल्यो । पुष्करको कृत्य देखेर नलको ह्दय फुट्ला फुट्लाभैंm भयो तर उनले मुखले केही पनि नबोलेर आफूले लगाएको जम्मै वस्त्राभूषण त्यागेर नगरबाट बाहिर निस्किए । दमयन्तीले पनि केवल एउटा सारी मात्र लगाएर पतिको अनुगमन गरिन् । नल र दमयन्ती नगर बाहिर तीन राति र दिन यताउति भौंतारिइरहे । दुष्ट पुष्करले नगरमा उर्दी जारी गरेको थियो कि जसले पनि नलप्रति सहानुभूति देखाउनेछ, उसलाई झुन्डयाइनेछ । यस प्रकारको उर्दीको भयले प्रजाहरूले आफ्ना प्यारा राजाको कुनै पनि किसिमको सत्कारसम्म गर्न सकेनन् । राजा नल र दमयन्ती तीन दिनसम्म केवल पानी मात्र पिएर बसे । चौथो दिन नललाई धेरै भोक–तिर्खा लाग्यो । उनीहरू अगि बढ्दै गए । केही पर पुगेपछि नलले देखे कि धेरै हाँसहरू उनको वरिपरि चारो टिपिरहेका थिए । हाँसहरूको प्वाँख सुनभैंm चम्किलो थियो । नलले मनमा विचार गरे– यिनीहरूको प्वाँख निश्चय नै दामी हुनुपर्दछ । यिनीहरूलाई समातेर प्वाँख बिक्री गरी केही धन पाउन सकिन्छ । तर हाँसहरूको ग
स्थानीय रुझानमा कमी
- चन्द्रकिशोर नेपाल नदीहरूको देश हो । यहाँ पहाड होस् कि मधेस, नदीसँग जोडिएर जीवन पद्धति विकसित भएको छ । आम मानिसको जीवनमा सांस्कृतिकरूपमा नदी एउटा भरोसा हो र एउटा परम्परा पनि । नदीलाई आजको भागदौडको जीवनमा सम्पूर्णतामा हेर्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने आवश्यकता हुँदै आएको छ । प्रकृतिले पनि मानिसलाई नदीको संरक्षक, सहयोगी र सेवाग्राही बन्ने अवसर दिएको छ । हाम्रा परम्पराहरूलाई केलाउने हो भने यी कुराहरू छर्ल· हुन्छ । नदीहरूको सन्दर्भमा चर्चा चल्दा वर्तमान राजनीतिले त्यसलाई जलस्रोत, जलविद्युत्, जलपर्यटन, जलपारवहन जस्ता विषयहरूसँग मात्र जोडेर हेर्छ । नदीको पानीको वितरण र बाँडफाँडबारे पनि थोरबहुत चर्चा चल्छ, भोलिको प्रान्तीयताको सन्दर्भमा वा भारतको सिमानामा जाने नदीहरूबारे । तर नदी सम्बन्धी बहस यतिमै पर्याप्त छैन । नदीलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा पुरानो हो तर अहिलेको समयले त्यसको उपेक्षा गरेको छ । उपभोक्तावादी शैली र सोचले नदीको दोहन गरेको छ । पुराना समयमा नदी बलियो थियो, त्यसैले त्यसको सामाजिक वर्चस्व थियो, हाम्रो समाजमा यससँग जोडिएको लोककथाहरू प्रशस्त पाइन्छ । नदीको पूजा गरियो, भक्ति गरि
नेपाल पत्रकार महासङ्घ पर्सा कार्यसमितिका लागि ९ जना उम्मेदवारको संयुक्त उम्मेदवारी घोषणा
प्रस, वीरगंज, १५ फागुन/ नेपाल पत्रकार महासङ्घ पर्सा शाखाको कार्यसमिति सदस्य पदका लागि ९ जना उम्मेदवारहरूले आज संयुक्त उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । कार्यसमिति सदस्य पदका घोषित उम्मेदवारहरूमा सफल खतिवडा, सञ्जीव मिश्र, छठु साह, दिपक गौतम र नवराज फुयाल रहेका छन् । त्यसैगरी आरक्षण कोटातर्फ महिलामा लक्ष्मी खरेल, दलितबाट विनोद परियार, मधेसीमा नरेश सर्राफ र आदिवासी जनजाति कोटाका लागि उत्तम खड्गीले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । महासङ्घ जिल्ला कार्य समितिको जम्मा १० सदस्यमध्ये आरक्षणतर्फ ४ र अन्यबाट खुलाबाट ५ सदस्य निर्वाचित हुन्छन् । भेलाले आरक्षणतर्फका चारवटै सदस्य पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको छ भने अन्यतर्फका पाँचवटा कोटामध्ये एक कोटा रिक्त राखिएको छ । वीरगंजमा सम्पन्न सर्वपक्षीय सञ्चारकर्मीहरूको भेलाले महासङ्घको कार्यसमितिको १० वटा सदस्य पदमध्ये ९ वटा पदमा उम्मेदवार घोषणा गरेको हो । सदस्य पदका लागि यसबाहेक अरू केही उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् भने केही उम्मेदवारीको तयारीमा छन् । उनीहरूमध्येकै योग्य एकजना उम्मेदवारलाई समूहमा मिलाउने गरी सदस्यको एक स्थान खाली राखिएक
महाशिवरात्रिको पावन अवसरमा सद्भावका लागि परमात्म ज्ञान
प्रस, वीरगंज, १५ फागुन/ ७८ औं महाशिवरात्रिको पावन अवसरमा ब्रह्माकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र वीरगंजको आयोजनामा “आन्तरिक शान्ति एवं विश्व सद्भावका लागि परमात्म ज्ञान” प्रवचन समारोह छपकैया स्थित विश्व दर्शन भवनमा सम्पन्न भयो । कायक्रमका प्रमुख अतिथि एमबि केडिया डेन्टल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक डा रामअवतार खेतानले दिप प्रज्जवलन गरी कार्यक्रमको उद्घाटन गदै वर्तमान तनाव युक्त समयमा अनेकौं मानसिक एवं शारिरीक रोगहरूको निदान राजयोगद्वारा गर्न सकिने कुरामाथि जोड दिए । कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि प्रमुख जिल्ला अधिकारी कैलाश कुमार बजिमयले शिव झण्डोतोल्लान गर्दै ब्रह्माकुमारी संस्थाद्वारा दिईने आध्यात्मिक ज्ञान र राजयोगको शिक्षाले मानिसको चरित्र निर्माणमा सुधार हुने भएकोले यसले समाजमा सद्भाव फैलाई शान्ति कायम हुने धारणा राखेका थिए । वीरगंज सेवा केन्द्रकी मुख्य संचालिका ब्रह्माकुमारी रविना दिदीको सभापतित्वमा सम्पन्न समारोहमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रिय सदस्य विजय कुमार सरावगी, वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्व अध्यक्ष गणेश लाठ, ब्रह्माकुमारी बेली दिदी, मिरा दिदी
अणुव्रतको आचारसंहिता पालन गरे सच्चा मानिस
प्रस, वीरगंज, १५ फागुन/ जैन धर्म मान्नेहरूले अणुव्रतको ११ बुँदे आचारसंहिता पालन गरे मात्र सच्चा मानिस हुने श्री महाआश्रमकी विदुषी शिष्या समणी निर्देशिका मलप्रज्ञाजीले बताएकी छन् । श्री जैन श्वेताम्बर तेरापन्थी सभाले जैन सभाभवनमा आयोजना गरेको प्रवचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रज्ञाजीले निरपराध प्राणीको सड्ढल्पपूर्वक हत्या गर्ने छैन, आक्रमण गर्नुहुँदैन, हत्या एवं तोडफोड प्रवृत्तिमा लाग्नुहुँदैन, साम्प्रदायिक उत्तेजना फैलाउन हुँदैन, मादक पदार्थ, माछामासु सेवन गर्नुहुँदैन, बोटबिरुवा, बिजुली पानीको दुरुपयोग गर्नु हुँदैनलगायत ११ सूत्रीय आचारसंहिता को शिष्या प्रज्ञाजीले विस्तारपूर्वक व्याख्या गरेकी थिइन् । अणुव्रत सड्ढल्प यात्राको क्रममा शिष्या प्रज्ञाजीले जैन भवनमा आफ्ना शिष्यहरूलाई प्रवचन सुनाइन् । भारतको मुम्बईबाट निस्केको अणुव्रत सड्ढल्प यात्रा भारतका विभिन्न शहरको परिक्रमा गर्दै केही दिन पहिले काठमाडौंं पुगेको र फर्कने क्रममा आज वीरगंज आइपुगेको हो । जैन धर्म मान्नेहरूले आज घण्टाघरबाट प्रभातफेरी गरी पुन: जैन धर्मशाला पुगेका थिए । श्री श्वेताम्बर तेरापन्थी सभाका अध्यक्ष विज
पिएन गिरी मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता शुरु
प्रस, वीरगंज, १५ फागुन/ ज्ञानज्योति उच्च माविको आयोजनामा पिएन गिरी मेमोरियल शिक्षक मैत्रीपूर्ण क्रिकेट प्रतियोगिता आजदेखि वीरगंजको नारायणी र·शालामा शुरु भएको छ । नारायणी अञ्चलका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले देश बाहिर नेपालको पहिचान खेलाडीको माध्यमबाट बढ्दै गएको बताएका छन् । वीरगंजले क्रिकेटमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादन गरेकोले खेलमा वीरगंजले पहिचान बनाइसकेको बताए । अब आउने पुस्तालाई पनि समेटेर जानुपर्ने वप्रउ खनालले बताएका थिए । म पनि खेलाडी भएकोले खेलाडीहरूको दु:ख, पीडा, थाहा भएको तर राज्यले खेलाडीहरूलाई अहिलेसम्म सहयोग नगरेको बताएका थिए । ज्ञानज्योति उच्च माविका निर्देशक दीपा योञ्जनको सभापतित्वमा शुरु भएको कार्यक्रममा प्याब्सनका अध्यक्ष महम्मुद्दिन अहमद, पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष केसी लामिछाने, अभिभावक सङ्घ पर्साका अध्यक्ष अमर गौतम, गौतम माविका सञ्चालक सोनम लामालगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रम सञ्चालन मोहन देवकोटाले गरेका थिए ।
स्कूल्स ग्रुपको ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सम्पन्न
प्रस, वीरगंज, १५ फागुन/ पर्सा स्कूल्स ग्रुपद्वारा आयोजित विद्यालय स्तरीय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । उक्त प्रतियोगिताको जुनीयरतर्फ ज्ञानोदय बाल सेक्रेन्डरीका छात्रा रचिता सुब्बा प्रथम, क्याम्ब्रिज माविका प्रियड्ढाकुमारी साह द्वितीय र एञ्जल मािवका सृष्टि शर्माले तृतीय स्थान हासिल गरेकी छिन् । त्यसैगरी जुनीयर छात्रतर्फ ज्ञानोदय सेक्रेन्डरीका राजाबाबु मन्सुरी प्रथम, क्याम्ब्रिज माविका भाग्यनारायण गुप्ता द्वितीय र एञ्जल माविका साहिल अख्तर तृतीय भएका छन् । सिनीयर छात्रातर्फ भने ज्ञानोदयका साँची गुप्ता प्रथम, मदरल्यान्ड माविका सावना परविनले द्वितीय स्थान हासिल गरेकी छिन् । त्यसैगरी छात्रतर्फ मदरल्यान्डका शैलेश साह प्रथम र ज्ञानोदयका आशिष गुप्ता भएका छन् । कार्यक्रमको संयोजक नन्दन यादवको सभापतित्व तथा त्रिजुद्ध माविका प्रधानाध्यापक रामेश्वर सिंहको मुख्य आतिथ्यमा सम्पन्न समापन समारोहमा विशिष्ठ अतिथि राससका अञ्चल प्रमुख शीतल महतो रहेका थिए । सो अवसरमा तराई एफएमका निर्देशक अजय यादव, भवानी मेडिकलका निदेशक राम श्रेष्ठलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
फ्रिडम आर्यन्स विजयी
प्रस, परवानीपुर, १५ फागुन/ युवा उपकार क्लब बहुअरीद्वारा सञ्चालित बहुअरी टी–२० क्रिकेट प्रतियोगितामा आज भएको पहिलो सेमिफाइनल खेलमा बहुअरी क्रिकेट क्लबलाई १०० रनले हराई फ्रिडम आर्यन्स क्रिकेट क्लब मुर्ली विजयी भएको छ । फ्रिडमले पहिलो पालीमा २० ओभर खेल्दै ६ विकेटको क्षतिमा १४७ रन बनाएको थियो । १४८ रनको लक्ष्य लिई दोस्रो पालीमा उत्रेको बहुअरीले १९ ओभरमा सबै विकेट गुमाई ४७ रनमा समेटिएपछि फ्रिडमले जीत हासिल गरेको थियो । आजको खेलमा ४१ रन बनाएका फ्रिडमका ज्याउल अंसारी म्यान अफ द म्याच घोषित भएका थिए । शनिवार दोस्रो सेमिफाइनल खेल नेपाल टाइगर क्लब, मुर्ली र मुर्ली क्रिकेट क्लबबीच हुने आयोजकले जनाएको छ ।
आर्थिक व्यवस्थापनको चुनौती
- शीतल महतो आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ मा ५ दशमलव ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भए यता अर्थतन्त्रको बिस्तारको दर ५ प्रतिशत पनि छुन सकेको छैन । त्यतिखेर डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा उक्त आर्थिक वृद्धि दर हासिल भएको हो । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन यता मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित भयो । सात वर्षपछि अहिले पुन: डा. महत अर्थमन्त्री हुनुभएको छ । डा. महत अर्थमन्त्री हुँदा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण भई मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने विश्वासका साथ अहिले निजी क्षेत्रमा उत्साह बढेको छ । तर अहिलेको अवस्थामा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पुर्‍याउन डा. महतका लागि सहज अवस्था भने पटक्कै होइन । सात वर्षअघि डा. महतका कारण मात्र नभई नेकपा (माओवादी) शान्ति प्रक्रियामा आएर पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा समेत सहभागी भएकोले लगानीकर्तामा विश्वास पलाएको थियो । त्यसयता बजेटलाई राजनीतिक उद्देश्य परिपूर्तिको हतियार बनाउन थालेपछि क्रमश: अर्थतन्त्रको विस्तार सङ्कुचन हुन थालेको देखिन्छ । यसपटक त समयमा बजेट आउन नसकेको वर्षभन्दा पनि अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहि
शिखर सम्मेलनल गर्दैमा लगानी बढ्ला त ?
- विश्वराज अधिकारी यो लेख तयार पारिरहँदा राजधानीमा लगानी बढाउने उद्देश्यले ‘नेपाल आर्थिक शिखर सम्मेलन’(ल्भउब िभ्अयलयmष्अ क्गmmष्त) शुरु भएको छ । र यो लेख पाठकसमक्ष पुग्दासम्म उक्त सम्मेलन समाप्त भइसकेको हुनेछ । यो सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य संसारभरिका लगानी गर्न इच्छुक मुलुक एवं तिनका नागरिकलाई नेपाल लगानी गर्न उपयुक्त (राम्रो मुनाफा दिने) मुलुक रहेको सूचित गर्नु एवं लगानीकर्ताहरूको हितको रक्षा गर्न (लगानीकर्ताहरूलाई अनुकूल हुने किसिमको नियम कानुन निर्माण एवं संशोधनसमेत गर्न पनि) नेपाल तत्पर रहेकोले निस्सड्ढोच लगानी गर्न आग्रह गर्नुरहेको छ । साथै सो सम्मेलनमा भाग लिन आएका, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ख्याति कमाएका विद्वान्, अर्थशास्त्री, व्यापारी तथा उद्यमीहरूको ज्ञान र अनुभवबाट नेपालले केही सिक्ने उद्देश्य पनि राखिएको छ । यसैगरी नेपालमा आर्थिक विकासको गति कसरी तीव्र बनाउन सकिन्छ भनी सम्मेलनमा उपस्थित विज्ञहरू बीच हुने छलफल एवं अन्तक्र्रियाबाट नेपालका सम्बन्धित पक्षले केही सिक्न सक्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ । अमेरिका, बेलायत, भारत, थाइल्यान्ड, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, जापान, श्रीलड्ढ
वर्तमान शताब्दीको अन्त्य पछिको जीवन
- ई. गोपाल श्रेष्ठ वर्तमान शताब्दीको अन्त्यपछि पृथ्वीमा १० अर्ब जनसङ्ख्या पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । १० अर्बमध्ये ८.५ अर्ब त शहर केन्द्रित नै हुने अनुमान छ । शहरीकरण हुनु भनेको खाद्यान्न उत्पादनको लागि उपयुक्त जग्गा खोसिनु हो । अनि आवास, सडक, खानेपानी, ऊर्जालगायत विभिन्न सुविधाको माग बढ्नु हो । यी विषयमा हामीले अहिलेदेखि नै सोचेनौं भने हामीले भावी पुस्तामाथि अन्याय गरेको ठहर्छ । बढ्दो जनसङ्ख्याको लागि खाद्यान्न आपूर्ति गर्न हामीले एकातिर खाद्यान्न उत्पादन बढाउनुपर्छ भने अर्कोतिर खाद्यान्नको नोक्सानी रोक्न सक्नुपर्छ । खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गर्न आधुनिक कृषि प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ र खाद्यान्न नोक्सानी रोक्न मुसा, चराचुरु·ी तथा खाद्यान्न ओसारपसारबाट हुने नोक्सानी रोक्नुपर्छ । साथै हामीले खाना खाने शैलीमा पनि सुधार ल्याई खानाको नोक्सानी शून्य पार्नुपर्छ । खानाको नोक्सानी शून्य गर्नु भनेको खाद्यान्नको उपलब्धता बढाउनु हो र फोहरमैला व्यवस्थापनलाई पनि सहयोग गर्नु हो । बढ्दो जनसङ्ख्याको लागि खानेपानीको थप आपूर्ति चाहियो । वनज·ल मासिंदै गए पानीको स्रोत पनि सुक्दै जान्छ । तसर्थ वन
सहमति भित्रको निहितार्थ
- श्रीमन्नारायण मिश्र नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको समाधानका निम्ति भएको सात बुँदे सहमतिपश्चात् नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा साझा सरकार गठन भएको छ । सहमतिका कतिपय बुँदा सत्ता साझेदारीसँग सम्बन्धित छन् भने केही विरोधाभावपूर्ण पनि छन् । सहमतिको पहिलो बुँदामा बाह्र बुँदे समझदारी, विस्तुत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र ताजा जनादेशको मूल मर्म र भावना बमोजिम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान एक वर्षभित्र निर्माण गर्ने उल्लेख छ । बार्‍ह बुँदे समझदारी र विस्तुत शान्ति सम्झौता पालन गर्दै अगाडि बढ्नु स्वाभाविक नै हो भने नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को सम्मान एवं त्यसलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नु पनि सबैको धर्म र कर्तव्य दुवै हो । रहयो कुरा, संविधानसभा दुईको निर्वाचन परिणामको मूल मर्म र भावना बमोजिम संविधान बनाउने कुरा । निर्वाचन परिणामलाई आफ्नो अनुकूल परिभाषित गर्नु ठीक नहोला । जनादेशको मर्म र भावनालाई आफ्नो दृष्टिकोणले परिभाषित गर्न नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले स्वतन्त्र छन् । तर एक दशकसम्म सशस्त्र सङ्घर्
मुलुकमा अव्यवस्थित र फोहोर नगरमध्ये वीरगंज पनि एक हो । यस कुरामा लाज मान्नु, रिसाउनु वा प्रतिरक्षा गर्नु जरुरी छैन । बाहिरका व्यक्तिले भन्नुभन्दा नगरवासीले अनुभूत गरेको कुरा हो । शहरको मुटुमा फोहोर र दुर्गन्धको भण्डार छ । घण्टाघर आसपास जाने व्यक्तिले प्रस्तावित पार्कस्थलमा थुपारिएको फोहोर र यत्रतत्र खुला मूत्रालयको दुर्गन्धको पीडा सहन नगरी सुखै छैन । त्यसैगरी नगरका अन्य क्षेत्रहरू पनि ग्रसित छन् । ढल निकास छैन, जताततै अव्यवस्थित तरिकाले घर निर्माण भइरहेका छन् । सडक किनारामा हरियो बोटबिरुवा रोपेर हरित लाइन बनाइनुपर्नेमा खुला शौचालयको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको अवस्था छ । यो दुरवस्थाबाट कहिले मुक्ति पाइएला वा ‘हाम्रो वीरगंज नगर सफा स्वच्छ शहर’को रूपमा कहिले परिणत होला भन्ने चिन्ता सबैमा छ । कुनै पनि सकारात्मक काम तथा अभियान वा परिकल्पनाको साकार रूप पाउन त्यहाँको समाजको हरेक व्यक्ति चेतनशील हुनु जरुरी छ । केही व्यक्ति मात्र चेतनशील र केही अचेतन वा अर्धचेतनशील रहेमा समस्या हुन्छ । किनभने राम्रो काम गर्न वा बनाउन मात्र गार्‍हो हुन्छ । बिगार्न सजिलो हुन्छ । चेतनाहीन व्यक्तिले समाज बिग्र
नगरको सरसफाइ काममा प्रहरी तदारुकता नगर क्षेत्रमा फोहर गर्नेलाई दण्डसहित पक्राउ गरिने – वप्रउ खनाल
प्रस, वीरगंज, १४ फागुन/ नगर क्षेत्रमा जथाभावी फोहर फ्याँक्नेलाई प्रहरीले पक्राउ गरी दण्डित गर्ने कुरा वप्रउ सर्वेन्द्र खनालले बताएका छन् । आफ्नो टोल, छरछिमेकीलगायत बाटोको छेउछाउ फोहर फाल्दा बिरामी सङ्ख्या बढ्ने र शहर नै कुरूप देखिन थाले पछि नियन्त्रणका लागि आजदेखि प्रहरी अगाडि बढेको वप्रउ खनालले बताएका छन् । नागरिक सुरक्षा समूह घुसुकपुर छपकैया तथा सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र छपकैयाको संयुक्त आयोजनामा आज सम्पन्न अन्तक्र्रियामा बोल्दै सरसफाइसँगै वीरगंजलाई अपराधमुक्त शहर बनाउन प्रहरी अगाडि बढेको बताए । नगर क्षेत्र विगतको तुलनामा धेरै विस्तार भएको कारण जनशक्ति अभावले गदौ नगरको उचित सरसफाइ हुन नसकेको वीउमनपाका कार्यकारी अधिकृत ताराबहादुर कार्कीले बताएका छन् । बढ्दो जनसङ्ख्याको कारण नगर क्षेत्र दुर्गन्धित भएको फोहर हटाउन टोलवासी अगाडि बढे मात्र वीरगंज सुन्दर शहरको रूपमा देखिने नगर प्रमुख कार्कीले बताएका थिए । अशिक्षाको कारण महिलाहरू उपचार गराउन नसक्दा रोग बढ्दै गएको नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालका मेसु रामशड्ढर ठाकुरले बताए । सामान्य रोग समयमा उपचार नगर्दा पछि ज्यानसमेत जा
पर्साको ग्रामीण क्षेत्रहरूमा एचआइभी सङ्क्रमित बढ्दै
प्रस, वीरगंज, १४ फागुन/ पर्सा जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्रमा पनि एचआइभी सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ । जिल्ला एड्स समन्वय समिति, पर्साले जनाए अनुसार पर्सा जिल्लाको मनियारी, लिपनीबिर्ता, ल·डी, धोबिनी, जयम·लापुर, मिर्जापुर, मुडली, भिस्वा, बगवन्ना, बागेश्वरी तित्रौना, पटेर्वा, सबैठवा, ठोरी, सुवर्णपुर, विजबनिया, गोविन्दपुर, सुपौली, हरपतगंज, अलौ, मधवन मथवल, सिर्सिया, पोखरिया ग्रामीण क्षेत्रमा सयजनाको हाराहारीमा एचआइभी सङ्क्रमितहरू रहेका र यी मध्ये ल·डीमा एकजना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको जिल्ला एड्स समन्वय समिति, पर्साका संयोजक श्वेता सरितले बताइन् । विस्थापित हुने र घरेलु महिलाहरू एचआइभी सङ्क्रमित भएको उनले बताइन् । मुख्यत: २५ देखि ५० वर्ष उमेरका मानिसहरू एचआइभी सङ्क्रमित भएको उनको कथन थियो । उमेरको हिसाबले पाको उमेरका व्यक्ति एचआइभी सङ्क्रमित हुनु चिन्ताको विषय भएको उनको भनाइ छ । पर्सा जिल्लामा एड्स सङ्क्रमित ३२ जना महिलामध्ये १९ जना विस्थापित तथा १३ जना घरेलु महिला एचआइभी सङ्क्रमित रहेको जनाइएको छ । गत असारसम्मको तथ्याड्ढ अनुसार वीरगंजको विभिन्न केन्द्रहरूमा गरिएको परीक्षणमा ८
– ब्रह्माकुमारी रविना संसारका सबै जयन्तीहरू एवं पर्वहरूमध्ये त्रिमूर्ति शिव जयन्ती अर्थात् महाशिवरात्रि पर्व सबैभन्दा अद्भुत, नौलो र प्यारो छ । महाशिवरात्रि पर्व सबै आत्मामा परमपिताको अवतरण भएको महान् पर्व हो । सत्यम्–शिवम्–सुन्दरम्, अमूर्त अजन्मा, म·लकारी शिव परमात्माको जन्म दिवस हो । त्यसैले नेपाल र भारतमा सबैले अत्यन्त स्नेह, श्रद्धा एवं भक्तिभावले यो महोत्सव मनाउँछन् । विश्वको विभिन्न संस्कृति, धर्मशास्त्रहरू, पौराणिक ग्रन्थहरू, इतिहास एवं पुरातात्त्विक शोधमा सर्वत्र नै भगवान् शिव ज्योतिस्वरूप निराकार आशुतोष वरदानीको शिवलि·रूपमा पूजा प्रतिष्ठान यादगाररूपमा गरेको पाइन्छ । यस पर्वमा शिव मन्दिरहरूमा भक्तजनको भीडले नै महाशिवरात्रि पर्वको लोकप्रियता एवं परमात्मा शिवमा जनमानसको अपार श्रद्धा छ भन्ने बुझिन्छ । देउताहरूको पनि देउता, पिताहरूको पनि पिता, सम्पूर्ण धर्मावलम्बीहरूको आस्थाका केन्द्र शिव सबैका अराध्यदेव हुनुहुन्छ, सबैको प्रिय हुनुहुन्छ त्यसैले सबैभन्दा बढी भक्तजनले परमेश्वर निराकार शिव परमात्मालाई नै मान्दछन् । महाशिवरात्रि पर्व जति लोकमान्य एवं सर्वप्रिय छ त्यति नै अद्भुत
जनताको सेवा गर
- सञ्जय साह ‘मित्र’ नेपाली जनता निराशाको अपरम्पार गहिरो खाडलमा छ । आशाको किरण कतै कुनै कुना वा दिशाबाट आएको देखिएन । हिजो जनताका लागि मरेका वा मारेका भन्नेहरूको गाउँदेखि शहर र राजधानीसम्म आलिशान महलहरू ठडिइसक्दा जनताको हालत जहाँको तहीं छ । पटकपटक सरकारमा गएको अनुभव र अनुभूति बटुल्नेहरूले जनताको विश्वास आर्जन गर्न सकेको देखिएको छैन । जनता जहाँ पनि भौतारिइरहेको जस्तो देखिन्छ । मरुभूमिमा घाम चर्केको बेला जस्तोसुकै सानो आशाको वृक्ष फेला परे पनि प्राण जोगाइदिने यही हो भन्ने आशावादी भएर जनताले आफ्नो पक्षमा आवाज उठाइदिनेलाई हेरेको हुन्छ तर नेपाली नेताहरूमध्ये जनताको आँखामा अझै नबिझाउने गरी आफ्नो पहिचान बनाउन सकेको देखिएको छैन । यो हप्ता मुलुकको धेरै क्षेत्रबाट अनिश्चितता र कुहिरोको बादल फाटेको देखिएको छ । आकाश केही छ्याङ्ग उघ्रिएको छ राजनीतिको । सरकारले पूर्णता पाउने बाटाका तगाराहरू हटेका छन् । विपक्षमा बस्नेको मनस्थिति पनि अब दरिलो भएको छ । अब सरकारमा कुन पार्टी जाने र कुन पार्टीले के गर्ने भन्ने बहसबाट नेपाली जनताले त्राण पाएको छ । अब सरकारको अनिश्चितता र नेपाली जनताले आफ्नो अमूल
केही काम निर्ममतापूर्वक पनि गर्नुपर्छ । निर्मम नबन्दा परिस्थिति आफैं निर्मम बन्न जान्छ, जुन मानिसको सामथ्र्यबाहिर हुन्छ । आज नेपालको वन–ज·ल क्षेत्रको निर्ममतापूर्वक विनाश भइरहेको छ । वनजन्य पदार्थ मात्र होइन, वनको क्षेत्रफल पनि दिनानुदिन घटिरहेको छ । वन जोगाउन नतातेको सरकार हो, सरोकारवाला निकाय हो । वन–ज·ल देशको सम्पत्ति हो, जनताको सम्पत्ति हो । त्यसैले वन–ज·लको सुरक्षाको पहिलो दायित्व सरकारको हो । त्यसपछि प्रशासनिक तत्परता चाहिन्छ, यी दुवैको सामञ्जस्य भयो भने नागरिकस्तरमा जनताको सहभागिता स्वयमेव हुन जान्छ । वन–ज·लमा सरोकारवालाबाहेक बिनाअनुमति कोही पनि जान पाउँदैन । खासगरी वन्य पदार्थमा हानिनोक्सानी पुर्‍याउने उद्देश्य बोकेको कसैको पनि प्रवेश रोक्न प्रशासन तत्पर रहनुपर्छ । तर सीधासोझा मानिस बरु ज·ल प्रवेश पाउन वञ्चित होला, रूख ढाल्ने, बालु–गिट्टी चोर्ने, शिकार खेल्नेहरूको आवतजावत निरन्तर जारी छ । यसै त सार्वजनिक हितका लागि भन्दै सडक, बिजुलीको नाउँमा ज·लको ठूलो विनाश भइसकेको छ । त्यसमाथि अहिले वनक्षेत्रमा गुम्बा निर्माण हुन थाल्नुलाई उदेकपूर्ण मात्र मान्न सकिन्छ । सिमरा–रामवनक
सरोकारवाला निकायको ढिलासुस्तीले मध्यवर्ती जङ्गलभित्र गुम्बा निर्माण
प्रस, जीतपुर, १३ फागुन/ पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष कार्यालय, आधाभार बारा तथा जनजागरण मध्यवर्ती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह रामवनको ढिलासुस्ती तथा लापरवाहीले मध्यवर्ती ज·लभित्र गुम्बा निर्माण भइरहेको समाचार छ । सिमरा गाविस अन्तर्गत मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र पर्ने रामवन ज·ल क्षेत्रमा करिब ३ कठ्ठा जग्गा अतिक्रमण गरी पक्की गुम्बा निर्माण भइहरेको छ । गुम्बा निर्माण रोका गराउन सम्बद्ध समूहलाई पत्र पठाएको छु र सो समूहका अध्यक्ष दुखा कुँवरलाई मौखिक निर्देशन पनि दिएको पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष कार्यालयका प्रमुख संरक्षण अधिकृत नीलाम्बर मिश्रले प्रतीकलाई बताएका छन् । वन्यजन्तु तथा वनज·लको जग्गाको सुरक्षा तथा विकास तथा स्थानीय बासिन्दाको आवश्यक काठदाउरा आपूर्ति गर्न मध्यवर्ती क्षेत्रका वन ज·ल स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । सोको संरक्षण र विकासमा बाधा–अडचन गर्ने गराउनेलाई कार्यालयले छुट दिएको छैन । सोही नीति अन्तर्गत गुम्बा निर्माण रोका गर्न प्रमुख संरक्षण अधिकृत मिश्रले कडा निर्देशन दिएको र सो विपरीत काम भएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाई गर्ने सहायक संरक्षण अधिकृत मंजुर अहमद
निश्शुल्क क्यान्सर रोग परीक्षण शिविर, गाउँटोलमा जान प्रजिअ बमिजयको आग्रह
महबुब आलम, पोखरिया, १३ फागुन/ निश्शुल्क क्यान्सर रोग परीक्षण एक दिवसीय शिविर एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम आज पोखरिया अस्पताल परिसरमा सम्पन्न भयो । नेपाल अर्बुद रोग नियन्त्रण संस्थाको आयोजना एवं रोटरी क्लब अफ वीरगंज, मेट्रोपोलिस र जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय पर्साको सहयोगमा सम्पन्न शिविरमा १५६ जनाको स्वास्थ्य परीक्षण भएको हो । शिविरमा भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका डा. प्रभु साहको नेतृत्वमा १८ सदस्यीय चिकित्सक टोलीले रोगीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको थियो । संस्थाका पर्सा जिल्ला अध्यक्ष उषा शाहको सभापतित्व एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी कैलाशकुमार बजिमयको मुख्य आतिथ्यमा सम्पन्न शिविर उद्घाटन समारोहमा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, पर्साका प्रमुख अरुण महतो, रोटरी क्लबका जगदीश अग्रवाल, अर्बुद रोग निवारण संस्थाका केन्द्रीय सदस्य बद्री पोखरेल, प्रकाश खतिवडा, शाखा सल्लाहकार पशुपति विक्रम शाह, पोखरिया असपताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मैनुद्दिन अन्सारीलगायतले मन्तव्य प्रकट गरेका थिए । सो अवसरमा प्रजिअ बजिमयले चेतना अभावका कारण अर्बुदरोगले मानवको ज्यान लिइरहेको उल्लेख गर्दै सामाजिक संघसंस्था
राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्डमा सरस्वती उमावि प्रथम
प्रस, वीरगंज, १३ फागुन/ नारायणी र·शाला वीरगंजमा भएको राष्ट्रपति रनिङशिल्ड प्रतियोगितामा सरस्वती उमावि गौतम नगर ठोरी प्रथम भएको छ । यसैगरी जीएचपी मावि द्वितीय र जनता उमावि पकडिया बडनियार तृतीय भएको छ । नेपाल सरकार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को आयोजनामा जिल्ला खेलकुद र विकास समिति पर्साले सञ्चालन गरेको राष्ट्रपति रनिङशिल्ड प्रतियोगिता अन्तर्गत आज समापन कार्यक्रममा विजेता उपविजेतलाई पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कै्रलाशकुमार बजिमयले नगद, शिल्ड र प्रण्मापत्र वितरण गरेका थिए । जिल्ला स्तरीय प्रतियोगितामा प्रथम हुने सरस्वती उमाविलाई रु १५ हजार, दोस्रो जीएचपी माविलाई रु १२ हजार र तेस्रो हुने जनता माविलाई रु ९ हजार प्रदन गरिएको थियो । आजको प्रतियोगितामा हाइजम्पतर्फ जनता उमाविका विपना बस्नेत प्रथम भए पनि निजविरुद्ध परेको उजुरी सम्बन्धमा जेकजाँच गर्दा निज बस्नेत सो उमाविको विद्यार्थी नभएको पुष्टि भएपछि अड्ढ घटेको थियो र दोस्रो हुने रङपुर टाँडी विद्यालयका प्रतियोगीलाई प्रथम घोषणा गरिएको थियो । जिल्ला खेलकुद विकास समिति पर्साका अध्यक्ष अमिताभ बच्चन दासको अध्य
अर्ती त अरूका लागि न हो !
- गोपाल ठाकुर साम्यवादी शिक्षा लिने क्रममा गुरुहरूले सुनाउने पुरोहितवादको व्याख्या गर्ने गर्दथे । व्याख्याको क्रममा दोहोरो मापदण्डलाई पुरोहितवादको मेरुदण्ड बताइन्थ्यो । अर्थात् पुरोहितवादले जे भन्छ त्यो गर्दैन र जे गर्दछ त्यो भन्दैन । यस सन्दर्भमा मेरा गुरु हरिहर यादवले एउटा लोक प्रस· सुनाउनुभएको म झल्झली सम्झिरहेको छु । त्यो एउटा लोक प्रचलित प्रस· पनि हो । एउटा लोक अनुभव पनि हो । त्यसमा एउटा श्रीमद्भागवत महापुराणको कथावाचक व्यास र उनकी पत्नीको व्यवहारको वर्णन छ । कुनै गाउँमा एकजना पुरोहित व्यासजी कहलिएका श्रीमद्भागवत कथावाचक थिए । कतिपय जिल्लामा उनलाई अब्बल गनिन्थ्यो । तर आफ्नो गाउँमा उनको कथावाचन चलेको थियो वा थिएन उनकी पत्नीलाई थाहा थिएन । एकपटक गाउँलेहरूले उनलाई गाउँमै कथावाचनको लागि अनुरोध गरे । बिचरा पुरेतबाजे अलि दक्षिणाको कुरोमा लोभिए । कथावाचनको क्रममा एक दिन खाद्य–अखाद्य पदार्थको प्रस· चल्यो । व्यासजी वैष्णव थिए । त्यसैले सबैभन्दा पहिले उनले मांसाहारी खानाका दोषहरू फलाक्नु त उनको धर्म नै थियो । शाकाहारी खानामा पनि शुद्ध र अशुद्धबारे उनको प्रवचन शुरु भयो । हरियो सागस
- विनोद गुप्ता फागुन ७ गते यस वर्ष भने धुमधामसँग मनाइयो । यो प्रत्येक वर्ष प्रजातन्त्र दिवसको रूपमा २००७ सालदेखि नै मनाउँदै आइएको उत्सव हो । २०१७ देखि ०४५ सम्मको पञ्चायती शासन व्यवस्थामा समेत यो उत्सव मनाइन्थ्यो । यस अर्थमा पञ्चायत र प्रजातन्त्रकालीन फागुन ७ गतेमा तात्त्विक अन्तर के छ भनेर खोज्दै जाँदा एउटा दिनलाई फरक खालले र व्यक्तिहरूको समूहले मनाउने गरेको बाहेक केही भेटिंदैन । माओवादी सरकारले त्यसैले होला यसको महत्त्व न्यून आकलन गरेको होला किनभने उनीहरूको बुझाइमा २००७ सालको क्रान्ति अपूर्ण क्रान्ति थियो । तर प्रजातन्त्रवादीहरूको लागि यो पञ्चायती प्रजातन्त्र दिवसभन्दा भिन्न हुनुपर्ने मेरो मान्यता हो । कुन अर्थमा भिन्न भने यस दिन मैना सुनुवारकी आमाले न्याय पाएको, अधिकारी दम्पतीले न्याय पाउन थालेको, जनकपुर हत्याकाण्डको दोषीहरूले सजाय पाएकोलगायत यस देशमा कानुन बलियोलाई लाग्दैन भन्ने उखान चरितार्थ गर्ने व्यक्तिहरू सजायको भागी हुन थालेको भए र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएका शहीद वा तिनका आश्रित परिवारको लागि केही कल्याणकारी काम हुन सकेको भए शायद यो प्रजातन्त्र दिवस पञ्चायतको भन्दा
नियति होइन, नियतको दोष
सत्ता भागबन्डाको एउटा चरण पूरा भएको छ । प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएर पनि प्रधानमन्त्री कहलाउने हक प्राप्त नगरेका सुशील कोइराला अब पूर्णरूपेण प्रधानमन्त्री हुने भएका छन् । निर्वाचनको उद्देश्य, जनताको अभीष्ट तथा देशको आवश्यकता यद्यपि संविधान निर्माण हो, तथापि मन्त्रिमण्डल गठन, जुन संविधान निर्माणको क्रममा चलिरहनुपर्ने एउटा औपचारिक आवश्यकता हो, यसैले पशस्त समय खाइदियो । संविधान निर्माणबिना गति छैन भन्ने हेक्का हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक दलहरूले पहिले र अहिले पनि सरकार निर्माणलाई नै प्रमुखता दिंदा यस्तो अवस्था आएको हो । केटाकेटीहरूले नयाँ खेलौनाका लागि पुरानो भाँचिदिने मानसिकताझैं राजनीतिक दलहरूले हिजो संविधानसभालाई भ· हुने अवस्थासम्म पुर्‍याएका थिए । त्यही नियतिको सड्ढेत आज पनि प्राप्त भइरहेको छ । त्यसैले सरकार गठन हुने भयो भन्ने खुशीभन्दा मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने क्रममा जति खेलहरू भए त्यसको अपरिपक्वताले निराश बनाएको छ । जुन आधारमा मन्त्रिभण्डल गठन हुने साइत जुर्‍यो, त्यसले भोलि मन्त्रिमण्डलले निद्र्वन्द्व काम गर्ने अवस्था देखिंदैन, जसको सबैभन्दा बढी प्रहार संविधान निर्माण कार्यले झे